KaliBrowser kana mashandisiro eKali Linux kubva kubhurawuza | Linux Vakapindwa muropa
KaliBrowser kana mashandisiro eKali Linux kubva kubhurawuza
Kali Linux ndeimwe yeanonyanya kuzivikanwa uye anoshandiswa ekubavha kugovera, rakakurumbira rave kutosvika pakuonekwa mune yakakurumbira terevhizheni Mr. Mr. Robot. Takataura zvakawanda nezve iyi Linux distro mune ino blog, kubva kunhau dzekuburitswa kweshanduro dzakasiyana, kuenzanisa nemamwe akafanana mahara, nezvimwe. Asi ikozvino tauya kuzotaura chimwe chinhu chakasiyana, uye ndiko kuuya kweKaliBrowser, chishandiso chinonakidza icho chingangove chinobatsira iwe.
KaliBrowser chirongwa ichangobva kugadzirwa nemubati uye nyanzvi yekuchengetedza Jerry Gamblin. Zvikurukuru, Gamblin yakagadzira midziyo miviri yekushandisa muDocker, chimwe chirongwa chinonakidza chatakataura nezvacho uye chinotibvumidza izvo zvazvino: kugonesa padanho rekushandisa nemidziyo. Zvakaitwa naJerry ndezvekuti isu tinokwanisa kushandisa Kali Linux mune yakaturikidzana pamusoro peyedu yakajairwa containerized yakasarudzika system.
Fungidzira kugona kuzere kwe zvishandiso Kali Linux kubva kubhurawuzaZvakanaka, rega kuzvifungidzira, nekuti ndizvo zvandiri kutaura nezvazvo. Kugadzira Kali Docker, OpenBox uye NoVNC tichakwanisa kunakidzwa nekushanda kwavo nekuda kwebasa raJerry Gamblin. Midziyo miviri iripo yeKaliBrowser yakasiyana, imwe yacho idiki uye inotakura yakasarudzika sisitimu, inodya ingangoita 841MB yekurangarira uye yechipiri inosvika kusvika ku2GB, asi yakazara zvakakwana, iine mamwe mapakeji senge gumi ane mukurumbira meta- mapakeji naKali LInux.
Kuishandisa, kutanga tinotora nekugadzirisa mapakeji emidziyo muzviitiko zvese angave (aine Docker akaiswa):
Inotevera, vhura yedu yatinofarira browser uye mubara rekero wedzera IP yedu (chinja IP yako neIP yemuenzaniso) kuti ivhure kubva pachiteshi 6080:
Paunenge uchimhanya mumudziyo, hauzovi panjodzi, sekunge iwe urikuzviita musheu chaiwo muchina ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » KaliBrowser kana mashandisiro eKali Linux kubva kubhurawuza
Sergio Schiappapietra akadaro
Inonakidza kwazvo iyi imwe sarudzo. Kutenda nekugovana!
Pindura Sergio Schiappapietra
ruregerero kusaziva kwangu, asi kali kali browser rinogona kushandiswa kubva kune chero inoshanda system
Pindura kuna lka
kalibrowser online ->http://kali-online.com/kalibrowser-web
Krita 3.0: inowanikwa nerutsigiro rwehupenyu